Ireo tafita velona tamin'ny 'Andron'ny Maty' dia Miverina Amin'ny 'Alin'ny Maty Velona II'
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ireo tafita velona tamin'ny 'Andron'ny Maty' dia miverina amin'ny 'Alin'ny Maty velona II'
by Trey Hilburn III Jolay 7, 2021 2,777 hevitra
Wow. Tsy mampino izany raha ny tatitra. Hita fa ny tantaran'ireo sisa velona George Romero's Andron'ny maty mbola tsy nifarana. Omaly dia nisy sary sy teaser fohy nipoitra ary saika very ny sainay. Toa mahazo tohiny isika Andron'ny maty mitondra ny lohateny hoe Alin'ny Maty velona II.
Ny teaser dia mampiseho ny trio feno rà sy vonona hiady izay samy mitazona ady mahazatra. Ny tohin'ny tohin'ilay tohin-tantara dia nilaza fa ireo sisa velona dia hanao trano ao amin'ny nosy iray. Misy dikany izany, satria nanonofy be izy ireo ny hanao azy io any amin'ny nosy afaka zombie. Fanampin'izay, toa nifanaraka tsara tamin'ny manodidina azy ireo izy ireo raha jerena ny fitrandrahana lobaka Hawaii tena milay.
Lori Cardille, Terry Alexander, ary Jarlath Conroy dia tafaverina amin'ity indray mitoraka ity. Tsy misy famerenana hafahafa amin'ity iray ity.
Tale, Marcus Slabine, no nandray ny andraikiny ho mpanoratra sy talen'ity ary tena faly tamin'ny tambajotra sosialy izy fa nanana ny voninahitra hitarika ireto telo ireto.
Mbola tsy misy daty famotsorana ofisialy ho an'ny Alin'ny Maty velona II, fa hitandrina ny masontsika foana isika amin'izay mety ho fivoarana hafa.
Ahoana ny hevitrareo lehilahy momba ilay tranofiara? Efa faly ve ianao mahita ny andro voalohany an'ny maty naverina miverina eny amin'ny efijery? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Halloween 1-5 tonga amin'ny kapila 4K UHD avy amin'ny Shout! Factory. Vakio bebe kokoa eto.